Dharka Magaalada - Dharka iyo isbeddellada ku dhaca Ragga Qaabka | Ragga Stylish
Alicia tomero | | nololeedka, fashion, Isbeddellada
Haddii ay tahay inaan ka hadalno dharka magaalada, waa inaan ka hadalno isbeddelladaas labbisto dhar caadi ah ama dhexdhexaad ah, laakiin ka sarreeya dhammaan magaalooyinka. Waa qaabka moodada ah ee inta badan ka dhex muuqda dhalinyarada iyo dhalinyarada wuxuuna ku habboon yahay in loo qaato munaasabadaha maalinlaha ah sida socodka, aada iskuulka, tagida filimada, la kulanka asxaabta ... guud ahaan waxaan ku darnaa sida jidka loo maro noqo mid raaxo leh, bilaash ah oo qaab jaan-gooyn ah.
Dharka magaalooyinka, ama dharka waddooyinka magaalada, waxay dejisaa isbeddelkeeda taariikhda qaar. Asal ahaan ka yimid Ameerika oo leh dhar isku dhafan in qaabab kala duwan lagu soo darayo (skate, hiphop, rock, punk) iyo qaabkaas gaarka ah ayaa loo sameeyay in lagu maro wadooyinka.
1 Astaamaha qaab-dhismeedka dharka magaalada
2 Sida loo helo qaab labbiska magaalada
2.1 Qaabka Magaalada Rock
2.2 Dharka Casriga ah ee Magaalada
2.3 Qaabka dharka magaalada Dadka sigaarka caba, oo ka yimid dhaqanka pop
2.4 Dharka Dharka Style Style
2.5 Dharka Hip Hop Style
Astaamaha qaab-dhismeedka dharka magaalada
Dharkiisa ugu muhiimsan waa surwaal, isboorti (midabyo kala duwan ama midab caadi ah), isticmaalka funaanado, funaanado iyo jaakad. Qalabka lagu yaqaan ee aadka u muuqda waa koofiyad iyo markaa balaclavas, muraayadaha indhaha. Muddooyinkii ugu dambeeyay, garbasaarrada iyo jaakadaha ayaa qaabkan loogu soo bandhigayaa naqshadaha magaaladooda awgeed
Xirmada dharkaani badanaa waa midabyo dhalaalaya, laakiin sidoo kale midabyo dhexdhexaad ah qaado marxaladda dhexe. Dharka leh qaabab kala duwan iyo qalab kala duwan ayaa la isku qasan yahay. Waxa ugu badan ee taagan qaabkan labiska ayaa ah qaabkeeda dhalinyarada iyo raaxadeeda. Jaakadaha ugu caansan waa qaab bambo, joonisyo jeexan iyo funaanado daabacan.
Midabada aan ka maqnaan karin dharkaaga dharka ayaa had iyo jeer ahaan doona madow, buluug madow, caddaan iyo cawl. Midabadaani waxay kuu fududeyn doonaan inaad isku darto midab kale oo muuqda. Markaad isku daraysid, haddii aad isticmaasho, tusaale ahaan, dhar mugdi ah oo hoose, waa inaad isku daydaa inaad ku darto dhar kale oo midab kala duwan leh xagga sare.
Sida loo helo qaab labbiska magaalada
Hel taas qaabka magaalada waa mid la macno ah fudeyd, Waa isku-darka surwaal, dharka isboortiga, jaakadaha, funaanado iyo isboorti. Midabada badanaa waa iska caadi, in kasta oo sawiro ama daabacado loo adeegsanaayo shaatiyadaha sida xariijimo ama caleemo.
Qaabka Magaalada Rock
Dharka dharka magaalada waa mid kale oo ka mid ah isku-darka, oo leh jooniskiisa caasiga ah ee leh funaanad wanaagsan ama shaati-gacmeed iyo jaakad maqaar oo aan muran-lahayn Kabaha sida aadka ah loo isticmaalo ayaa badanaa ah kabaha nooca maqaarka ah ama kabaha canqowga.
Dharka Casriga ah ee Magaalada
Waa dharka magaalooyinka waxaana loo doortaa si caadi ah. Ma jiro sharci go'an ama nooc kasta oo shuruud ah oo lagu xidho dharka noocan ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu tago wax maalin kasta iyo si aan rasmi ahayn. Dharkaan u istaag xirashada midabada dhexdhexaadka ah, qalabyada sida koofiyadaha, koofiyadaha ama garbasaarrada, kabo raaxo leh iyo wixii ka sarreeya, waxay leeyihiin qaab shaqsiyeed adiga kuu gaar ah. Tusaalaha aan ku sharraxnay, waxaad ku arki kartaa surwaal nooca Soft Denim ah, midab beige dhexdhexaad ah iyo dhexda laastik ah si aad ugu raaxeyso.
Shaadhku waa mid aasaasi ah oo jidhka ku dhagan, kana samaysan cudbi iyo laastik. Jaakad gaagaaban, mid fudud iyo cufan ayaa lagu doortay midab dhexdhexaad ah oo si fiican u eg. Kabaha ayaa ah nooca isboorti ee isboortiga, madow oo leh xargo. Iyo dabool leh nashqad suuxsan lama waayi karo dhammaystir ahaan.
Qaabka dharka magaalada Dadka sigaarka caba, oo ka yimid dhaqanka pop
Qaabkani wuxuu u muuqdaa inuu yahay dharka magaalooyinka iyo taas wuxuu saameyn ku yeeshay qaabkiisii ​​90-meeyadii, halkaas oo casri cusub oo casri ah habka labiska loo dallacsiiyay. Sawirka waxaan ku arki karnaa sida surwaal nooca Slim ah oo leh dhexda nooca raaxada leh ee loo yaqaan 'Jogger' uu xiran yahay, oo leh xarig la isku hagaajin karo. Markan oo kale, dhar baa la saaray mid kale.
Dharka la xushay waxay ahaayeen shaati fudud oo la hubiyey oo leh dhar saameyn cidhiidhi leh oo ay la socdaan hoodie flannel ah oo leh xirmo laastik ah oo la rakibay. Kabaha ayaa ah kabo isboorti oo kaabis ahaan ah waxay dooratay koofiyad feeraha, oo ka samaysan suuf iyo midab liin dhanaan leh.
Dharka Dharka Style Style
Iyagu waa hormoodka qaabkan oo waxaan arki karnaa dhalinyaro badan oo u heellan inay xirtaan isbeddelladan.Jaanisyada is bedbeddelaya, ballaadhan oo dillaacsan, dhididka, funaanado ay ku daabacan yihiin, xargaha gacmaha, koofiyadaha iyo kabaha waaweyn ee kabaha lugta leh oo leh suulasha wareega.
Dharka Hip Hop Style
Qaabkani wuxuu u abuuraa dhaqan farshaxankiisa, Waxaa ka mid ah soo jeedinno fara badan oo aan ku daawan karno qaabka ay u labistaan, farshaxankooda muusikada, qoob ka ciyaarka iyo sawirrada la qabtay. Waxyaabaha uu jecel yahay ayaa ah hal-midab ama jaangooyooyin qaab jaangooyooyin ah, funaanado ballaadhan oo ballaadhan, kabaha isboortiga, iyo agabyada sida xijaabka, silsiladaha cufan, iyo muraayadaha indhaha.
Isku-darka ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn iyada oo aan laga tagin noocyada noocan ah ee dharka. Qaabka la calaamadeeyay ayaa noqon doona midka ka dhex guuxa shakhsiyadda mid kasta. Waxay kuxirantahay naftaada waxa ugufiican ee aad xidhato iyo shuruudahaaga iyo shaqsiyaadkaaga. Waxaa jira dhar aan la tirin karin oo suuqa yaala oo waa inaad doorataa waxa adiga kugu habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Dharka magaalada
Sida miisaan lumis loo sameeyo iyadoo aan la cunin cuntada ka hor inta aysan cimiladu fiicnayn